Réponses pour «manana»:
Total: 100 résultats - 0.219 secondes
Izay manana ny foibem-pikambanany ao…………………………… izay soloin’Atoa/Rtoa …………………………….tena.
SEKTA, NY PAIKADINY SY NY AMPINGAKO 93%
Izay rehetra nifanerasera taminy dia nahalala avokoa fa tena niavaka izy tamin’ny fitiavana ny finoana indrindra moa fa ny fanampiana izay rehetra manana olana ka sendra azy na ny olona teto an-tanindrazana izany na ireo vahiny nandalo.
Ny Fanjakana dia manana zo hanaramaso ny bokim-bola sy ny piesy rehetra tandrify izany, na ara-potoana, na tsy ara-potoana.
 Manana saina liana amin’ny fivoarana sy ny fandrosoana mifanaraka amin’ny soatoavina malagasy.
Tsy tokony hisy olona mifehy ho tratrin’io fotoana io ao anatin’ny loto mitaky fandroana toy ny janaba… Tsaratsara kokoa ny mahavita ny s’alat agrib sy Isha vao manapaka fifehezana raha tsy sanatria hoe efa tena malemilemy be ka tsy manana hery hiatrehana an’izany intsony.
033 03 928 40 onja.fen@gmail.com www.nyavo.wordpress.com Novokarin’ny groupe artistique MIANTSA NY AVO « Tandremo ny fonao mihoatra izay rehetra tokony hotandremana Fa avy ao aminy no ivohahan’ny aina » Ohab 4—23 « Samy efa nanota izy rehetra ka tsy misy manana ny voninahitra avy amin’Andriamanitra » Rom 3.
4 ny sampana velona ao aminy ary manana antoko mpihira sy gazety koa ny Fjkm Gland.
mba ho soa manana ny rariny ary miampy tsara tahaka ny tsara tarehy miambozom-boahangy.
Fa ny Hazhaa dia entina manondro lehilahy na zavatra heverina ho manana « genre masculin » ary ny Hazhihi kosa dia entina manondro vehivavy sy ireo zavatra manana « genre féminin ».
27 4B - Ireo disadisa (mety) hiteraka korontana manana p.
Mitovy zo ny olona rehetra eo anatrehan'ny lalàna, samy manana fahalalahana fototra arovan'ny lalàna ary tsy misy fanavakavahana na amin'ny maha-lahy na amin'ny maha-vavy, na amin'ny fari-pahalalàna, na amin'ny fari-piainana, na amin'ny fiaviana, na amin'ny finoana, na amin'ny tsy fitovian-kevitra.
Manaña fomba fijéry telo samy hafa isίka mikasika ny fitenenana sy ny famaritana ny fahatongavana ary ny fisian’olona izáy nañitsaka voalohany ny volana, ka toy izáo no metiméty ho fomba fanambarána izány :
Ny vondrom-paritra tsirairay dia tsy maintsy manana fandaharan'asa fampitaovana fampandrosoana telo taona mifanesy, havaozina isan-taona") 6.
Ekena fa tsy manana andraikitra mivantana amin’ny “fampiofanana ireo olona maniry ny hiroso amin’ny fanambadiana” izahay.
Ny mpifaninana tsirairay dia manambara ara-dalàna fa manana zo amin’ny fizakamanana ara-tsaina mifandray amin’ny tetikasa tanterahina anatin'ny fifaninanana.
Ny Dhya-ous-S’alihin no nofidiana nakana ny ankamaroan’ireo zavatra resahana ato satria azo inoana fa maro no efa manana ny boky Mafaatihoul djinan.
Misy ray aman-dreny manana ankizy tezainy ao an-trano no tonga manontany tena noho ireo zanany izay manjary samihafa mihitsy eo amin’ ny fianarany.Samy zaza omentsakafo sy fitaizana mitovy izao saingy ny sasany lasa matsilo sy manana tadidin’elefanta,ny hafa toa zara raha mahovoka firy.Misy fahitan’ ny olona maro koa fa somary miverin-tsaina ny olona rehefa antitra.Tsy misy tsaroany ny zavatra vao niseho,eny na dia ny vao haingana aza.Ny mahagaga kosa anefa dia arany tsara ery sy voapetrapetrany amin’ny antsipirihany ny zava-nisy tamin’ ny fahazazany amam-pahatanorany.